Wasiirka difaaca oo kormeer ku tagay deegaanno u dhow magaalada Jowhar
Wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Soomaaliya oo ay wehliyaan saraakiisha ciidamada Xoogga Dalka ayaa maanta kormeeray difaacyadii ugu dambeeyay ee Ciidamada X.D.S ay kala wareegeen Maleeshiyaadka Kooxda al shabaab ee kaabiga ku haya magaalada Jowhar ee xarunta Gobalka Sh/Dhexe.
Kormeerkan uu ku jooga wasiirka wasaaradda Difaaca dalka Mudane C/xakiim Xaaji Maxamuud “Fiqi” ayaa waxaa socdaalkiisa ku wehliyay Taliyaha ciidamada X.D.S C/qaadir Sheekh Cali Diini, saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Africa ee AMISOM.
Wasiirka Difaaca dalka goobaha uu kurmeerka ku tagay ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Qalimoow oo kaabiga ku haysa magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/Dhexe halkaas oo uu kula hadlay ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka.
Mudane C/xakiim Fiqi ayaa ciidamada ku amaanay sida geesinimada leh oo ay qeybo ka mid ah gobolka Sh/dhexe uga xoreyeen maleeshiyada kooxda shabaab waxa uuna tilmaamay in uu aad ugu faraxsanyahay in kormeerkiisi ugu horeeyay uu ku tago qeybo ka mid gobolkaasi.
Fiqi ayaa qeexay in la fulinayo amarkii ka soo baxay Madaxweynaha Soomaaliya kaas oo ku aadanaa in dil toogasho ah uu muteysan doono askarigii kufsi u geysta gabar Soomaaliyeed.
Sidoo kale taliyaha ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya Mudane C/qaadir Sheekh Cali Diini oo ciidamada hadal u jeediyay ayaa ku amaansay sida hufan oo ay u guteen waajibaadkooda iyo sida ay dalka uga xoreeyaan cadawga shabaab ee xadgudubka kula kaca shacabka Soomaaliya.
Ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay dalka ka wadaan howlgal ka dhan ah kooxda Al-qaacidada Soomaaliya ee shabaab iyo ajaanibtooda waxeyna ciidamada haatan kaabiga ku hayaan magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe iyadoona Jowhar ay tahay magaalo madaxda kalihay oo ay haraadiga ku yihiin maleeshiyaadka shabaab.